Ebe e kenyere ebo ọ bụla ala n’Izrel (1-29)
Ọnụ ụzọ ámá iri na abụọ dị n’obodo (30-35)
Obodo aha ya bụ “Jehova Nọ Ebe Ahụ” (35)
48 “Otú a ka a ga-esi kenye ebo ọ bụla a kpọrọ aha ala, malite na nsọtụ ebe ugwu: Ebe Dan ga-eketa+ bụ bido n’ụzọ e si aga Hetlọn ruo Libo-hemat*+ na Heza-inan, ruokwa n’akụkụ Hemat,+ n’ókè Damaskọs n’ebe ugwu. Ókè ya ga-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. 2 Ebe Asha ga-eketa+ bụ ebe ndịda nke ala Dan. Ókè ya ga-esikwa n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. 3 Ebe Naftalaị ga-eketa+ bụ ebe ndịda nke ala Asha. Ókè ya ga-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. 4 Ebe Manase ga-eketa+ bụ ebe ndịda nke ala Naftalaị. Ókè ya ga-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. 5 Ebe Ifrem ga-eketa bụ ebe ndịda nke ala Manase.+ Ókè ya ga-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. 6 Ebe Ruben ga-eketa bụ ebe ndịda nke ala Ifrem.+ Ókè ya ga-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. 7 Ebe Juda ga-eketa bụ ebe ndịda nke ala Ruben.+ Ókè ya ga-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. 8 N’ala nke Juda, malite n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ, ala unu ga-ewepụta iche ga-adị puku kubit* iri abụọ na puku ise (25,000) n’obosara.+ Ogologo ya ga-ahakwa ka ókè ebo ndị ọzọ, malite n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. Ụlọ nsọ ahụ ga-adịkwa n’etiti ya. 9 “Ala unu ga-enye Jehova ga-adị puku kubit iri abụọ na puku ise (25,000) n’ogologo, dịkwa puku kubit iri (10,000) n’obosara. 10 Ọ bụ ndị nchụàjà ka a ga-enye ala a dị nsọ.+ Ọ ga-adị puku kubit iri abụọ na puku ise (25,000) n’ebe ugwu, puku kubit iri (10,000) n’ebe ọdịda anyanwụ, puku kubit iri (10,000) n’ebe ọwụwa anyanwụ, puku kubit iri abụọ na puku ise (25,000) n’ebe ndịda. Ụlọ nsọ Jehova ga-adịkwa n’etiti ya. 11 Ọ ga-abụ nke ndị nchụàjà, bụ́ ụmụ Zedọk ndị e doro nsọ.+ Ọ bụ ha nọ na-arụrụ m ọrụ. Ha ahapụghịkwa m mgbe ndị Izrel na ndị Livaị hapụrụ m.+ 12 Ha ga-enweta ala n’ala ahụ e nyere Chineke, nke bụ́ ala kacha nsọ. Ọ ga-adị n’akụkụ ala ndị Livaị. 13 “Ndị Livaị ga-enweta ala n’akụkụ ala ndị nchụàjà. Ọ ga-adị puku kubit iri abụọ na puku ise (25,000) n’ogologo, dịrịkwa puku kubit iri (10,000) n’obosara. (Ogologo ya ga-adị puku kubit iri abụọ na puku ise [25,000], obosara ya adịrị puku kubit iri [10,000].) 14 Ha agaghị ere ebe ọ bụla n’ọmarịcha ala a ere. Ha agaghị eji ya gbanwere ihe ọzọ. Ha agaghịkwa enye ya ndị ọzọ, n’ihi na ọ dị nsọ n’anya Jehova. 15 “Ala nke fọrọnụ, nke dị puku kubit ise (5,000) n’obosara, na puku kubit iri abụọ na puku ise (25,000) n’ogologo, ga-abụ nke ndị obodo.+ Ha ga-ebi na ya, nweekwa ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa. Obodo ahụ ga-adịkwa n’etiti ya.+ 16 Otú a ka obodo ahụ ga-aha: Ebe ugwu ga-adị puku kubit anọ na narị ise (4,500). Ebe ndịda ga-adị puku kubit anọ na narị ise (4,500). Ebe ọwụwa anyanwụ ga-adị puku kubit anọ na narị ise (4,500). Ebe ọdịda anyanwụ ga-adịkwa puku kubit anọ na narị ise (4,500). 17 Ebe anụmanụ ga na-ata ahịhịa n’obodo ahụ ga-adị narị kubit abụọ na iri ise (250) n’ebe ugwu, narị kubit abụọ na iri ise (250) n’ebe ndịda, narị kubit abụọ na iri ise (250) n’ebe ọwụwa anyanwụ, nakwa narị kubit abụọ na iri ise (250) n’ebe ọdịda anyanwụ. 18 “Ebe ga-afọdụ ga-aha ka ala ahụ dị nsọ n’ogologo.+ Ọ ga-adị puku kubit iri (10,000) n’ebe ọwụwa anyanwụ, nakwa puku kubit iri (10,000) n’ebe ọdịda anyanwụ. Ọ ga-aha ka ala ahụ dị nsọ. Ndị na-ejere obodo ozi ga na-eri ihe ala ahụ mepụtara. 19 Ọ bụ ndị a na-ejere obodo ozi, bụ́ ndị si n’ebo niile n’Izrel, ga na-akọ ubi n’ala ahụ.+ 20 “Akụkụ nke ọ bụla n’ala niile e nyere Chineke ga-adị puku kubit iri abụọ na puku ise (25,000). Unu ga-ahapụ ya na ala ndị obodo ka ha bụrụ ala dị nsọ. 21 “Ala ọ bụla fọrọ n’akụkụ abụọ nke ala ahụ bụ́ onyinye dị nsọ nakwa nke fọrọ n’akụkụ abụọ nke ala ndị obodo ga-abụ nke onyeisi.+ Ọ ga-adị n’akụkụ ala ahụ dị puku kubit iri abụọ na puku ise (25,000), ma n’ebe ọwụwa anyanwụ ma n’ebe ọdịda anyanwụ. Ọ ga-aha ka ala ebo abụọ ketara. Ọ ga-abụkwa nke onyeisi. Ala ahụ bụ́ onyinye dị nsọ nakwa ụlọ nsọ ga-adị n’etiti ala ya. 22 “Ala ndị Livaị na ala ndị obodo ga-adị n’etiti nke onyeisi. Ala onyeisi ga-adị n’agbata ala Juda+ na ala Benjamin. 23 “A bịa n’ebo ndị ọzọ, Benjamin ga-eketa malite n’ókè nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo na nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ.+ 24 Ala Simiọn ga-adị n’akụkụ ala Benjamin,+ malite n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. 25 Ala Ịsaka+ ga-adị n’akụkụ ala Simiọn, malite n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. 26 Ala Zebulọn ga-adị n’akụkụ ala Ịsaka,+ malite n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ.+ 27 Ala Gad ga-adị n’akụkụ ala Zebulọn,+ malite n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda anyanwụ. 28 Ókè nke ala Gad n’ebe ndịda ga-amalite na Tema+ ruo na mmiri Meribat-kedesh,+ ruo na Ndagwurugwu,*+ ruokwa n’Oké Osimiri Mediterenian.* 29 “Ọ bụ ala a ka unu ga-ekere ebo niile n’Izrel ka ọ bụrụ ihe ha ketara.+ Ebe ndị a ga-abụ nke ha.”+ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a. 30 “A ga-enwe ụzọ ndị a ga-esi na-abata ma na-apụ n’obodo ahụ. Ebe ugwu ga-adị puku kubit anọ na narị ise (4,500).+ 31 “Ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ ga-adị ole ebo niile n’Izrel dị. A ga na-akpọkwa nke ọ bụla aha ebo a gụrụ ya. Ọnụ ụzọ ámá atọ ga-adị n’ebe ugwu. Otu ga-abụ ọnụ ụzọ ámá Ruben. Ọzọ ga-abụ ọnụ ụzọ ámá Juda. Nke ọzọ ga-abụ ọnụ ụzọ ámá Livaị. 32 “Ebe ọwụwa anyanwụ ga-adị puku kubit anọ na narị ise (4,500). Ọ ga-enwe ọnụ ụzọ ámá atọ. Otu ga-abụ ọnụ ụzọ ámá Josef. Ọzọ ga-abụ ọnụ ụzọ ámá Benjamin. Nke ọzọ ga-abụ ọnụ ụzọ ámá Dan. 33 “Ebe ndịda ga-adị puku kubit anọ na narị ise (4,500). Ọ ga-enwe ọnụ ụzọ ámá atọ. Otu ga-abụ ọnụ ụzọ ámá Simiọn. Ọzọ ga-abụ ọnụ ụzọ ámá Ịsaka. Nke ọzọ ga-abụ ọnụ ụzọ ámá Zebulọn. 34 “Ebe ọdịda anyanwụ ga-adị puku kubit anọ na narị ise (4,500). Ọ ga-enwe ọnụ ụzọ ámá atọ. Otu ga-abụ ọnụ ụzọ ámá Gad. Ọzọ ga-abụ ọnụ ụzọ ámá Asha. Nke ọzọ ga-abụ ọnụ ụzọ ámá Naftalaị. 35 “Ebe ahụ niile ga-adị puku kubit iri na asatọ (18,000) gbaa gburugburu. Aha obodo ahụ malite n’ụbọchị ahụ gawa ga-abụ Jehova Nọ Ebe Ahụ.”+
^ Ya bụ, Ndagwurugwu Ijipt.
^ Na Hibru, “n’Oké Osimiri ahụ.”